Thwebula WinSCP 5.13.6 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: WinSCP
WinSCP – a isofthiwe ukunikeza kukopa eziphephile amafayela phakathi kwekhompyutha yakho kanye amaseva ukusekela SFTP kanye SCP yezifiso. Isofthiwe kwenza ukuba adale futhi ngezifiso property amafolda, futhi ulayishe amafayela thwebula, ukudala links ongokomfanekiso noma izindlela ezinqamulelayo njll WinSCP iqukethe esakhelwe text umhleli eyenza ukuhlela umbhalo amafayela wendawo futhi ezikude. Automation of the software wenziwa esebenzisa zokubhala kanye umugqa wemiyalo. WinSCP futhi ihlanganisa izinhlobo ezimbili interfaces sokuqhafaza, izilungiselelo of okwenziwa usebenzisa isethi nemingcele.
Ukukopishwa Secure of amafayela
Sekela imisebenzi eyisisekelo ifayela
Two izinhlobo interfaces sokuqhafaza
Amazwana ku WinSCP
WinSCP software ehlobene
Ithuluzi ukuvikela ulwazi ngokumelene abangaphandle. Isofthiwe kuqinisekisa ukulandelana okunokwethenjelwa ukuvikelwa idatha ngokusebenzisa enamandla ukubethela ubuchule.
Abaphathi bephasiwedi, Ukubethela
Ithuluzi lokusebenza lokuthola nokususa amagciwane. Isofthiwe ivikela ngezinsongo ezihlukahlukene futhi ikuvumela ukuthi ukhawulele ukufinyelela kumawebhusayithi amakhulu.
Cốc Cốc 76.0.114
Isiphequluli ukuthi ine ukwesekwa eziphambili amathebhu. Isofthiwe ungalanda okuqukethwe ezilalelwayo nezibukelwayo kusuka kumasayithi ezahlukene ngaphandle izicelo engadingeki.
Ithuluzi eliphumelelayo ukulawula izimali. Isofthiwe ikuvumela ukuba lokhozi izindleko noma izimali futhi zibonisa isimo sezimali ngesimo emagrafu.
Ithuluzi ukwenza ngcono ukusebenza computer futhi silungise izimbungulu in ohlelweni. Isofthiwe ikuvumela ukuba ngiqhube scan ejulile futhi silungise izinkinga ezihlukahlukene.
Indlela elula ukuthuthukisa inkumbulo futhi zifunde izilimi zakwamanye amazwe. Isofthiwe uhlaziya Mastering ulwazi umsebenzisi futhi inquma inani elihle kunawo yokufunda algorithm.
Isofthiwe popular igxile ukudalwa sokuxhumana bezijabulisa kakhulu webcam. Isofthiwe ine inqwaba ezahlukene visual effects.
Lena isofthiwe enesethi yamabhulashi ahlukene asekela izendlalelo nokulungiselela ukudala imidwebo yedijithali ngokusebenzisa ithebulethi ecacile.
Umdlali Amatebhe ngokusekelwa ethandwa abezindaba amafomethi. Isofthiwe inikeza sokudlala eliphezulu amafayela abezindaba kanye nomsebenzi ne engezansi.